Home Somali News Maxamed Cali Caadle oo amray in laga guuro Isbitaalka Jowhar
Wasiirka Arrimaha Gudaha Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle, ayaa amar ku bixiyay in laga guuro Isbitaalka Goboleedka Jowhar oo ay gacanta ku heyso Hey’adda Intersos ee laga leeyahay dalka Talyaaniga.
Isbitaalkan oo soo shaqeynayay 20-kii sano ee la soo dhaafay ayaa waxaa uu bulshada ku dhaqan Gobolka Shabeellaha Dhexe u hayay adeeg caafimaad oo aad u muhiim ah.
Amarka ka soo baxay Wasiirka Arrimaha Gudaha oo ah in laga guuro Isbitaalka, si ay Xafiisyo uga dhigtaan Wasiirada Maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa wax laga xumaado ku tilmaamay bulshada reer Jowhar.
Go’aanka Wasiirka ayaa ah mid xadgudub ku ah xeerarka caalamiga ah, sida in awood loo isticmaalo xarun caafimaad oo dadka xanuunsan adeeg caafimaad loogu sameeyo.
Agaasimihii Isbitaalka Xasan Mahad ayaa shalay xabsiga la dhigay, kaddib amar ka soo baxay Wasiirka Arrimaha Gudaha, waxaana sababaha loo xiray Agaasimaha lagu sheegay amar diido iyo inuu ka dhega adeegay go’aankii Wasiirka ee ahaa in isbitaalka laga guuro.
Qaban qaabada banaan bax looga soo horjeedo Wasiirka Arrimaha Gudaha Hirshabeelle ayaa saaka laga dareemayaa magaalada Jowhar, kaddib amarkii uu ku bixiyay in laga guuro Isbitaalka.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Hirshabelle oo 20-kii sano ee la soo dhaafay ku noolaa dalka Sacuudiga, ayaa ah nin aan la socon xaalada ka jirta gobolka iyo marxaladihii uu soo maray Isbitaalka, waxaana Isbitaalka uu ahaa mid daboolay baahida caafimaad ee dadka ku nool Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Waxaa jirta cabsi laga qabo in Xarumihii Hey’adaha Sama falka iyo goobaha waxbarashada ee ku yaala Jowhar inay isu bedelaan xafiisyo Wasiirada tirada badan ee Hirshabeelle, kuwaasoo aanay xilligan heysan xafiis.